Mogadishu Journal » Wijnaldum oo ku wajahan Barcelona: Waa maxay sababta uu Koeman xiddiga Liverpool ugu kaxaynayo Camp Nou
Wijnaldum oo ku wajahan Barcelona: Waa maxay sababta uu Koeman xiddiga Liverpool ugu kaxaynayo Camp Nou
Ronald Koeman iyo madaxweynaha cusub ee Joan Laporta ayaa khariidayn doona mustaqbalka kooxda Barcelona inta lagu jiro fasaxa xulalka, in Dutch-ka oo la aadana waxay la socon doontaa dhaqanka Camp Nou.
Naadiga oo beryahanba magacyo u ahaa xiddigo waa weyn oo reer Holland ah ayaa laga yaabaa inay arkaan xiddigo badan oo Oranje ah oo imanaya, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum uu sheegay inuu bartilmaameed weyn u yahay.
Sida laga soo xigtay Sunday Times, Wijnaldum wuxuu heystaa heshiis horudhac ah oo uu ugu wareegayo Barcelona marka heshiiskiisa Anfield uu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Ku soo noqoshada tababarihii hore ee xulka Koeman waxay codsi cad u diri doontaa Wijnaldum, kaasoo ka feejignaa mustaqbalkiisa Liverpool.
Laakiin muxuu Wijnaldum u keenayaa koox horeyba ugaarsi ugu jirtay labada guri? Da'da 30 jir, saxiixani macno ma u sameyn lahaa Barca?
Maxay yihiin xulashooyinka ay Barcelona horay u haysatay?
Ma noqon karto qadka dhexe ee nooca Pep Guardiola uu ku maneystay, Sergio Busquets waa badbaadiyihii ugu dambeeyay ee waagaas bartamaha garoonka, laakiin Barca si xun ugama aysan helin tayo.
Busquets iyo Miralem Pjanic ayaa keenaya khibrada, Pedri oo ah dhalinyaro aad u xiise badan iyo Frenkie de Jong waa tayo la hubiyay markuu ku soo dhowaaday bartamihiisa 20s.
Waxay heystaan ​​dookha weerarka ee Philippe Coutinho - kaasoo dhaawac ku maqnaa tan iyo bishii Diseembar - halka Riqui Puig uu yahay karti aan Koeman u muuqan mid aan hubin.
Busquets iyo De Jong waxay u muuqdaan labo qadka dhexe oo xoogan, iyagoo daboolaya inta badan garoonka, iyadoo De Jong uu jecel yahay inuu ka fogaado kanaalka dhexe.
Waa maxay farqiga u Wijnaldum samayn lahaa?
Da'da 30, 'Gini' hoos uma dhigeyno celceliska da'da, in kasta oo taasi hubaal tahay inay dhowaan u noqon doonto mudnaan Koeman.
Tababaraha madaxa wuu ogyahay wax walba oo ku saabsan ciyaarta Wijnaldum laga soo bilaabo waqtigii ay wada joogeen xulka qaranka Holland, sidaa darteed waxaa jira is aaminaad halkaas ka jirta, iyo in la helo xiddig caalami ah oo si bilaash ah ugu biiri kara, inkasta oo mushaharkiisu sarreeyo, loo arki karo mid wanaagsan heshiis.
Weli si aan ugu kuur galno xogta xilli ciyaareedkan, waxaa muuqata inay jiraan goobo aad u yar oo Wijnaldum uu kaga sarreeyo dalagga ay haatan leedahay Barcelona.
Farmaajo iyo Xulufadiisa oo ku sugan Afisiyooni, Deni iyo Axmed Madoobe oo maqan (Sawirro)